Wasiiradda arrimaha dibadda maamulada Soomaaliya iyo Yuusuf Garaad, xiriiriyihii shirka.
DHUUSAMAREEB, Galmudug - Shirkii madaxda maamulada Soomaaliya oo lasoo gabagabeeyay wejigiisa koowaad ayaa laga soo saarey war-murtiyeed ay ku cad yihiin qodobadii ay hogaamiyeyaasha ku heshiiyeen.
Wasiiradda arrimaha gudaha maamuladda oo uu wehliyo Yuusuf Garaad Cumar, wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya, ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen xarunt Galmudug ku shaaciyey go'aanada.
Bayaanka oo nuqul kamid ah uu arkay warsidaha Garowe Online ayaa doorashooyinka soo aadan ee Soomaaliya aysan noqon karin isla markaana loo baahan yahay in laga heshiiyo nooca iyo habka loo marayo.
Warka qoraalka ah oo hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay leedahay in doorashadda ay waqtigeeda ku dhacdo ayaa ka digay muddo kororsi loo sameeyo hay'addaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka ah.
Hogaanka dowlada federaalka iyo madaxweyneyaasha maamulada ayay soo jeediyeen in ay shir wadatashi isugu yimaadaan Dhuusamareeb "si ay uga arrin-sadaan tubta farsamo qabsoomida doorashada 2020-21".
Balse, lama soo bandhigin waqtiga uu dhici doono shirkaas, taas oo la macno ah in ay tahay arrin ay kawada heshiin doonan dhamaan dhinacyadda ay khuseyso, waase hadii dhanka dowladda dhexe kasoo jawaabto.
Ugu dambeyntii, shirka ayaa uga mahadceliyey Beesha Caalamka kaalinta ay ka qaadaneyso dhismaha geedi u socodka dowladnimada Soomaaliya oo heerar kala duwan soo martay, haddana mar-xalad adag wajaheysa.
Shirka jaraa'id ee shaacinta war-murtiyeedka
Soomaliya 10.08.2020. 00:25
Madaxweynaha Galmudug ayaa baaq u diray ka qeybgaleyaasha shirka oo madaxda dalka ay kamid yihiin.
Bandow la geliyey Dhuusamareeb iyo Galmudug oo war beenisay
Soomaliya 08.07.2020. 12:24
Qoor-qoor oo xaflad xilka kula wareegay xili ay jirto halista Corona
Soomaliya 12.04.2020. 22:35
Xukuumada oo shaacisay in ay wada hadal la furtay Ahlu Sunna
Soomaliya 29.08.2019. 14:00
Hogaanka Ahlu Sunna oo faarujiyey magaaladda Dhuusamareeb
Soomaliya 27.08.2019. 15:35
Diyaarad ciidamo kasoo daabushay magaaladda Dhuusamareeb
Soomaliya 24.03.2020. 20:20